कुन प्रदेशको राजधानी कता ?
प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिन...
जहाँ टर्च बालेर सुत्केरीको उपचार गरिन्छ
काठमाडौं । दार्माकोटस्थित स्वास्थ्य चौकीमा विद्युतसेवा नहुँदा उपचार प्रभावित भएको छ । रातको समयमा काम गर्न मुस्किल पर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । युरोपियन युनियनको अनुदानमा जडान गरिउको ६ सय ...
पूर्व मन्त्री, सचिवसहितका २ सय उच्च अधिकारी निगरानीमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जनमा करिब दुई सय जना राष्ट्रसेवकलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । अख्तियारले यतिबेला गोप्य रुपमा उनीहरूका गतिविधि पछाइरहेको छ । ...
कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खेलमा मन्त्री मण्डल
काठमाडौं । आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल मन्त्रालय माताहत भएका करोडौं घोटालामा संलग्नालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण गर्दै संस्थाानहरुमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खेलमा लागेका छन् । जग्...
जब ओमानी दूतावासै आएर नेपाली युवतीको किनिएको बिल देखाउँछन्
काठमाडौं । एक ओमानी नागरिक रिसाउँदै मस्कटस्थित नेपाली दूतावास आइपुगे । उनको घरमा काम गर्ने झापाकी २३ वर्षीया युवती दूतावासको आश्रयमा थिइन् । मस्कटबाट हजार किमि टाढा सललाहबाट भागेर उनी दूतावासको शरणमा...
पत्याउन गाह्रो पर्ला अस्पतालमा विरामीहरुको खरिद बिक्री हुन्छ
काठमाडौं । पत्याउन गाह्रो पर्ला तर गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा विरामीहरुको खरिद बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ मारुती भ्यान, एम्बुलेन्स चालक वा स्वास्थ्य सम्वद्घ व्यक्तिका रुपमा ...
विदेशबाट फर्के लगत्तै देउवा र राजपालाई ओलीको खरो प्रश्न(भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नियमित उपचार गरी थाइल्यान्डबाट बुधबार दिउँसो स्वदेश फर्केका एमाले...
भ्रष्टाचारीलाई नेता बनाउन प्रधानमन्त्रीको लबिङ
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउने गरी कांग्रेसका १९ ...
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब–भत्ता कति तोकिँदै छ?
काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरी स...
सरुवा सूची पठाउँछन् गृहमन्त्रीका पीए
काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवामा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने घोषणा गरेको दुइृ महिना बित्न नपाउँदै सरुवाका लागि लामो सूची प्रहरी मुख्यालय पुगेको छ । गृहमन्त्रीका स्वक...
डा. केसी अस्पताल भर्ना : के भयो केसीलाई ?
काठमाडौं । सप्तरीका बाढी प्रभावितको उपचार गरेर फर्किएलगत्तै डा. गोविन्द केसी बिरामी परेका छन् । रिामी भएका कारण उनी शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएका छन् । २३ दिनको आमरण अनसनलगत्तै डा. केसी बाढी...
नियम छल्दै सेयर खेल्दै
काठमाडौं। नियामक निकायका बहुसंख्यक कर्मचारीले कानुनविपरित दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीसहित विभिन्न कानुनले नियामक निकाय राष्ट्र बैंक बिमा समिति अर...
जताततै मन्त्रीहरुको भेडीगोठ : प्रहरीलाई दौडधुप
काठमाडौं । यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ ? प्रहरीका एक जना असई हतार हतार एक होटलमा सोधीखोजी गर्दै थिए । होटलको ढोकामा रहेका व्यक्तिबाट आफ्नो प्रश्नको उत्तर नपाएपछि ती असईले काउनटरमा गएर जवाफ लिए । नेपा...
काठमाडौं । मुलुकभरका पण्डितहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले काजकिरिया (मृताशौच) १३ दिन नै बार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय धर्मशाला नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनको अन्तिम दि...
अस्थायी शिक्षक : पास भए जागिर, फेल भए ?
काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकले स्थायी सेवाको परीक्षामा उत्तीर्ण पास नभए पनि आर्थिक सुविधा गोल्डेन ह्यान्डसेक पाउने गरी कानु िब्यवस्था हुन लागेको छ । यसअघिको आठौं संशोधनले गोल्डेन ह्यान्सेकसहितको अवकाश...
‘लाइफ लाइन’ कब्जा गर्न चुनावी ‘भिडन्त’
काठमाडौं । मुलुकको ‘लाइफ लाइन’ को रुपमा रहेको प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जमा बाजी मार्न दलले सम्पूर्ण साधन, शक्ति र स्रोत प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । आक्रामक प्रचार प्रसारका लागि...
कानुन अभावले निर्वाचन तयारी प्रभावित
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले समग्र निर्वाचन तयारी प्रभावित भएको छ । निर्वाचन आयोगले कानुन अभावमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीलाई आ...
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश कस्ता कार्यक्रममा जाने भन्ने बहस छ । मलाई यस्ता कार्यक्रममा आउँदा आलोचना हुने हो कि भन्ने पनि छ । वास्तवमा पुस्तक विमोचनको निम्तो पाएपछि म सुरुमा अलिकति हच्किएको थिए...
कुलमान घिसिङलाई हटाइदै !
काठमाडौं । दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी हुने गरेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन उर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी लागिप...
भारतले रोक्यो पानी : बन्द भयो बिजुली
काठमाडौं । गाउँ डुबानमा परेको भन्दै सुस्तावासीले गण्डक नहर बाँधको डिल काटेपछि भारतीय पक्षले मुख्य पश्चिम बनहरमा पानी बन्द गरेको छ । भारतले पानी रोकेका कारण गण्डक जलविद्युत गृहबाट बिजुली उत्पादन ठप्प ...